2010/2012/2015 Election » ပထမ ခြေလှမ်း သို့၆ ရက် အလို – Best of Luck, Burma…!!!	23
Kaung Kin Pyar says: ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်တန်ပြီလေ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ညတွင်းချင်း မဲရေရမှာတော့သိတယ်။
မြစပဲရိုး says: ဘာလဲဟ။ မဲ စာရင်း အဖြေ ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရင် Live တောင် ဖွင့်ချ ပြောနေရတာ။
ညစ်လုံးတွေ က တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး။ ဒီလောက် စဉ်းစားအသိဉာဏ် နဲ တဲ့ ဟာ တွေ ရဲ့ ပြည်သူ ဖြစ်ရတာ ရှက်ပြီး ရင်း ရှက်၊ စိတ်ပျက်ပြီး ရင်း ပျက်ဘဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီလို ကြားနေတာ ပဲ အရီးရေ။
naywoon ni says: ၂ ပတ်​ ကြာ မှ တစ်​နိုင်​ငံလုံး ရဲ့ အရှုံး အနိုင်​ကို ​ကြောငြာနိုင်​မယ်​လို့ ​ပြော​နေတယ်​ ခမျ ကိုယ့်​မဲရုံ ဘယ်​သူနိုင်​တယ်​ဆိုတာ မှတ်​ပြီး ရင်​ခုန်​စွာ ထီထိုးကြပါဦးလို့ Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ဂျက်စပဲရိုး says: ခု မြင်နေတာတွေကလေ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောရရင်တော့ စိတ်ဒုန်းဒုန်းမချနိုင်သေးတာ အဲဒါ။
အဲဒီ ကွန်မြူနစ် စကား က နောက်ပိုင်း သမ္မတ ကြီး ပါးစပ်ထဲ ရောက်သွားတော့ အဆက်အစပ် တွေ ရှိနေသလိုဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: မောင်လေးက မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးထဲပါတော့ မေးကြည့်ထားတယ်… မဲရုံစောင့်ကြည့်ရေးတွေ သေချာသင်တန်းပေးထားတယ်တဲ့.. မဲပုံးတွေပို့ရင်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်ကြည့်မှာတဲ့.. ခု ချိတ်ပိတ်ဖို့ ချိတ်တုံးရှာဖွေရေးလုပ်နေတယ်.. အခု ၁၈၀ လောက်လိုတယ်ဆိုလို့… နောက် အွန်လိုင်းမှာလည်း မဲရုံစောင့်ကြည့်ရေး ဗော်လံတီယာခေါ်တော့ ကိုယ်တောင် သွားလျှောက်သေးတယ်… ကိုယ်က နယ်ပြန်ပေးမှာဆိုတော့ ဧရာဝတီတိုင်းအတွက်လျှောက်တာ.. လူပြည့်သွားပြီတဲ့.. ကိုယ်မလုပ်လိုက်ရပေမယ့် ဝမ်းသာစရာပါပဲ… အဲဒီလိုအဖွဲ့တွေလည်း ရှိနေတယ်… ဒါလေးတွေသိထားတော့ စိတ်တစ်ဝက်လောက်တော့ အေးသေးတယ်… ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့နေ့သေချာစောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်.. တစ်ခုပဲ.. ဟိုးဝေးလံခေါင်ဖျားတွေသတင်းတော့ ဘာမှမကြားမိတော့ စိတ်ပူတယ်.. ဖြေတွေးကြည့်ရင်တော့ အဲ့ဘက်တွေလည်း ရှိနိုင်မှာပါ.. တရားဝင်မကြေညာတာက အဲဒီဗော်လံတီယာတွေကိုပါ ညစ်ပလိုက်မှစိုးလို့ ထင်တာပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့လို လေးတွေ ရှိစေချင်တာ။
kai says: ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. ကိုယ်ထည့်မယ့်ပါတီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အမည်ကို.. အိမ်ရှေ့မှာ.. မှတ်တိုင်လေးတွေစိုက်ခွင့်ပြုတယ်….ကန်င်ပိန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတယ်..။
မြစပဲရိုး says: တစ်ချို့ ဝန်ထမ်း တွေ က ကြောက်နေဆဲ တဲ့။ တစ်ချို့ ကျ အိမ်မှာဘဲ နှစ်ပါတီ၊ သုံးပါတီကွဲ။
kai says: တပ်ရယ်… ၀န်ထမ်းတွေရယ်က… အဲဒီအရောင်အခြေအနေတွေကြည့်ပြီးမှ.. “၀ုန်း”လိမ့်မယ်..။
ထပ်ခါပြောနေရမယ်ဖြစ်ပြီး.. ပြောတာဟာ..အကောင်းဆုံးမဲဆွယ်နည်းဖြစ်မယ်လို့.. အာမခံ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောပါ့မယ် ခညာ.. ညန်မာ့ သားးဂေါင်းး ဇာနီ စစ်တားးဂျီးး ဂို အနော် မျှော်မှန်းးဒီ
မြစပဲရိုး says: ❧❧ ဖြူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သူရဦးရွှေမန်း၏
မြစပဲရိုး says: အဲဒီမှာတော့ သူ့ ကို အားပေးကြမဲ့ ပုံဘဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: လောလောဆည် ကိုယ်ချင်း အစာရဆုံး သူတွေကို ပြပါဆိုရင် တပ်မတော်သားတွေကို ပြရမှာပါပဲ။ ကိုယ်တွေ ၀န်ထမ်းဘ၀မှာ အထက်လူကြီးက တဖက်စီးနင်းဆန်ပြီး အမိန့်တွေ လိုတာထက် ပိုထုတ်နေရင် အင်မတန် စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ ကိုယ်တွေတောင် ဒီလောက် စိတ်ကျဉ်းကြပ်တာ “အမိန့် နာခံတတ်မှုပေါ်မှာ ဘ၀ကို တည်ဆောက်ထားရတဲ့ တပ်မတော်သား” တွေဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ စိတ်ပင်ပန်းရတယ်။
အောက်ခြေ တပ်မတော်သားတွေကိုပဲ ကိုယ်ချင်းစာသလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်က တပ်မတော်သား အရာရှိတွေကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ သူတို့အတွက် လိုအပ်နေတာက အသိဥာဏ် လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ အသိမှန်သမျှကို ဘောင်တစ်ခုထဲ ကန့်သတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ဒါထက်ကျော်ပြီး တွေးဖို့ ခက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါက မြင်ရသော အတားအဆီးထက် ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ သိတဲ့ အသိကို ကျော်မတွေးတတ်တော့လို့ပါ။ ဖက်ဒရယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်က ခွဲထွက်ဖို့ ကြံတယ်လို့ သင်ကြားခံခဲ့ရတာမျိုး၊ ငါတို့သာ တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့်ထားတယ်လို့ သင်ကြားခံခဲ့ရတာမျိုးဟာ အတော်ကို ဖောက်ထွက်တွေးဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူ့နောက်က ထပ်ဆင့် တည်ထားတဲ့ အတွေးပါ။ အုတ်မြစ်အစောင်းပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ အဆောက်အဦဟာ တည့်ဖို့ ခက်သလိုပါပဲ။ အဲလို အတွေးမှားတွေကြောင့် နောက်က ဆက်တွေးတဲ့ အတွေးတွေလည်း မှားကုန်ပါတယ်။ တို့အသက်စွန့်ခဲ့လို့ ဒါတွေ ရယူတာ တရားတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးပါ။ သူတို့ကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ အတွေးတွေကို ကျော်မြင်စေချင်ပါတယ်။ တပ်မတော်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်နေတာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးပါ။ ရှေ့လူတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ကို နောက်လူက လိုက်ပြီး ခံနေစရာမလိုပါဘူး။ သို့သော် ရှေ့လူအမှားကို မပြင်ပဲနဲ့တော့ အမှန်ကို ရောက်ဖို့ ခက်လိမ့်မယ်။ ရှေ့လူတွေ အမှားကို ပြင်ဖို့ ဆိုတာက အမှားကို အမှားလို့ ခံယူဖို့လိုတယ်။ မှားတော့ မှားတယ်၊ အခြေအနေက ဒီလိုဖြစ်လာလို့ လုပ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြီးတွေနဲ့ ဖော့တွေးနေသ၍ အမှန်မရောက်ဘူး။ အမှန်မရောက်သ၍ မပြင်ရဲဘူး။ မပြင်ရဲသ၍ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး မဖြစ်လာဘူး။ ပြင်ဖို့ လိုနေတာ ဒေါ်စုမဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်ပါ။ ဒေါ်စုဟာ သူ့မောင်လေးတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ မေတ္တာမပျက်ခဲ့ပါဘူး။
Alinsett @ Maung Thura says: အမေကတော့… မကြောက်နဲ့တဲ့… ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ ပါတီကို ရဲရဲကြီးသာ ပေးလိုက်ပါတဲ့..။
.နောက်ပြီး… ၉၀% လောက်တော့ နိုင်စေရမယ်တွေဘာတွေ…လုပ်မနေပါနဲ့တဲ့… ဈေးဆစ်မနေပါနဲ့တော့တဲ့… nld ကို ၁၀၀% ပြည့်အောင်သာ မဲပေးလိုက်ကြပါတော့တဲ့…။ အခုအချိန်က….အမေ…စကားတွေ များများ ပြောရမယ့်အချိန်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြောက်ရမှာကို ကြောက်ကြရင် ကောင်းမယ်
Mike says: Tun Tun Win ရှယ်ထားတာတွေ့လို့မလာတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to Aikai Sai
# ပွဲမစခင်ကတည်းက (၅၉-စ)နဲ့ အဓိက Player တစ်ယောက်ကို အနီကဒ်ပြပြီး ပွဲပယ်ခဲ့လေတော့ …. တစ်ယောက်လျော့အနေအထားနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်နေရတယ် …. # ပွဲကစားတော့ ကွင်းရဲ့ (၃ပုံ/၄ပုံ) (၇၅%)ကိုသာ ဖွင့်ထားပေးပြီး ခံစစ်နဲ့ ပိတ်ကစားတယ် …
မြစပဲရိုး says: တစ်ရက် ဘဲ လိုတော့ တယ် ဇီကလေးရေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရီးးရေ